Alaabooyinka iyo Adeegyada | P&O MG LATAM | Advanced Prosthetics
Aaladaha dhabta ah iyo kuwa horumarsan
Maqaarka Maqaarka Aadanaha
Prosthesis ee Brachymetatarsia
Prosthesis cagta ee Chopart
Sime Foot Prosthesis
sanaaciga naaska ama naaska
Prosthesis Ibta Naaska
Daboolka lafaha ee faraha, ilaaliyayaasha iyo hagaajinta
gacmaha lafaha lugaha
100% nashqado gaar ah, suuf iyo qalab loogu talagalay cagta
Cilmi-nafsiga * Advanced Prosthetics
kala saarayaasha suulasha
MAMMARY 3D, Barbaarinta iyo Tababarka
Dhakhaatiirta lafaha iyo traumatology
Tusaalooyinka ka guuleysiga
Cudurada iyo cilladaha
Shaqaale caafimaad oo heer sare ah
Qoraalo iyo Warar
cillad la'aanta iyo curyaaminta
Prosthetics iyo orthotics ee bini'aadamka
Prostetics iyo lafaha xoolaha
maqaarka bani-aadmiga synthetic
Caafimaadka * Qalabka software iyo hardware
Farsamooyinka soo koraya ee caafimaadka
Qalliin caag ah
Prosthetics Advanced & Orthotics MG LATAM » Alaabooyinka iyo adeegyada
Bogga: Alaabta iyo Adeegyada
Advanced, Hyperrealistic Prosthetics MG LATAM * Shaqooyin farshaxan oo cajiib ah
inta badan la codsado
Qalab sare oo Farta ah
Aaladaha Sare ee Ortho ee faraha gacanta * MG LATAM, ayaa mid walba loo soo saaray iyadoo loo eegayo daraasadda shaqsiyeed ee…
Prosthetics horumarsan ee suulasha lugaha
Aaladaha Sare ee Orthopedic ee cagta MG LATAM, ayaa mid walba la soo saaray iyadoo loo eegayo daraasadda shakhsi ahaaneed ee bukaanka iyo…
Advanced Prosthetics ee Gacmaha
Aaladaha Sare ee gacanta, laga bilaabo MG LATAM, ayaa mid walba la soo saaray iyadoo loo eegayo daraasadda shaqsiga ah ee bukaanka iyo…
Wax badan ka arag...
Prosthetics Advanced iyo Orthoses * Dibadda iyo Hyperrealistic
Nafis jireed iyo mid shucuureed oo uu bukaanku u qalmo
muuqaalka ugu fiican
P&O MG Qalabka Prosthetic waa:
Shaqooyinka fanka ee cajiibka ah, shaqsiyeeyay heer sare, qiyaas sax ah.
Muuqaalka, tayada iyo cimri dhererka, ugu fiican.
Inta badan waxaa lagu soo saaray isdhexgalka ee MG Hyperrealistic Skin (qaacida gaarka ah) iyo qaybaha kale ee gaarka ah. Sidoo kale, gaar ah (teknoolajiyada, lafaha, anatomical, farsamada iyo qurxinta.).
Laga saari karo, bilicsanaanta iyo waaqiciga sarreeya, aad u dabiici ah. Iyada oo leh qaab-dhismeedka, midabka, codka, qaabka, laalaabka, iyo faahfaahinta kale ee ku dayashada si dhab ah kuwa bukaanka.
Xiriirka - Aagga Macmiilka
Xal gaar ah oo cusub oo loogu talagalay dadka u baahan inay hagaajiyaan caafimaadkooda iyo muuqaalkooda jireed, badi ahaan kuwa ay sabab u tahay dhaawaca ama cudurada ku dhasha; uu ka lumo suulasha lugaha ama gacanta (falanx fog, dhexe iyo mid u dhow), qayb ama wadar laga gooyay gacanta, cagta, lugaha, cududda, sanka, qayb ka mid ah wejiga ama dhegta, naasaha, barida iyo kuwa kale ee addimada iyo qaybaha kala duwan ee dibadda ee jirka. Shakhsi ahaan, oo leh ergonomic iyo taam u gaar ah. Waxa loo sameeyay in lagu cabbiro qof kasta oo ku habboon jidh kasta, qaab-dhismeedkiisa, physiognomy iyo midabka maqaarka.
Farsamada gaarka ah, MG LATAM, waxay maamushaa inay magdhabiso yaraanta lafaha.
Waxay soo saartaa anatomy dhabta ah iyo waxyaalaha la isku qurxiyo ee bukaanka. Si fiican ugu dayashada muuqaalka dhabta ah ee shaqsi kasta. Dib-u-dhiska qaybta jirka ee la gooyay, oo leh cillad ama cillad hidde-side.
Xirfadlayaasha MG ee horumarsan iyo kuwa dhabta ah ayaa yeelan doona macluumaadka ugu muhiimsan ee qofka; morphology, faraha, cabbirka, midabka cidiyaha, jiirarka iyo xididdada, iwm.
Wax walba waa la samayn karaa, qayb ahaan xidhiidh toos ah oo lala yeesho macaamilka inta lagu jiro habka wax soo saarka. Si loo habeeyo heer kasta oo khasaare ah, gaar ahaan qayb ka mid ah goynta qayb ahaan, oo ay weheliso kurtin haraaga ah. Kiisaska kakan ama kala-goynta, waa inaad weydiisaa khabiirka MG wax ku saabsan beddelka aad heli karto.
Xaaladaha oo dhan, waxaa la dammaanad qaaday in qalabka MG ee horumarsan iyo kuwa waaqiciga ah ay si fiican ugu dheggan yihiin kurti ama addinka haraaga ah. Kuma dhacaan ama kuma dabciyaan isticmaalka maalinlaha ah.
Waad ku mahadsan tahay SOQ-MG * MG Orthopedic Sock (patent la sugaya) Waa la gashan karaa ama waa laga saari karaa ilbiriqsiyo gudahood, si fiican ayey ugu habboon yihiin. Qalab sare oo waaqici ah MG uma baahna kiimikooyin gaar ah ama qalab, xabag ama faashado meelaynta maalinlaha ah. Mana jirto farsamo gaar ah ama qalab dheeraad ah oo iyaga lagaga saaro.
Khabiirada * MG LATAM
Falsafada abuurista MG LATAM iyo kooxda naqshadaynta gaarka ah waxay ku salaysan tahay dareenka fahamka in nabar kastaa uu gaar yahay, sidoo kale qalab kasta (horumar iyo mid aan hore u lahayn) oo ay sameeyaan.
Isticmaalayaashu waxay helayaan qaybo gaar ah, oo runtii shakhsiyeeyay kuwaas oo ku habboon si dabiici ah anatomically, kuwaas oo si sax ah ugu habboon qaybta jidhka ee ay saamaysay, dhammaan si waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee qofka.
Tiknoolajiyada Matrix waxay asal ahaan ka soo jeedaan daraasad joogto ah oo qoto dheer oo ku saabsan nidaamka lafaha aadanaha, iyada oo loo marayo cilmiga sida:
Morfology (adaabta sayniska, oo ka kooban Xanuun qeexitaan, muuqaal muuqaal ama gobol iyo mid shaqaynaya)
Biomechanics (daraasad makaanikada lagu dabaqay jirka bini'aadamka)
Kinesiology (edbinta caafimaadka ee barata dhaqdhaqaaqa jidhka)
Ergonomics (laqabsiga walxaha iyo deegaanka ee anatomy iyo physiology)
Waxaa lagu gaaraa iyada oo lala kaashanayo culuumta iyo xirfadaha kale, kuwaas oo ka dhigaya isku-dhafka ugu habboon ee u dhexeeya sayniska, daawada, anatomy, kimistari, makaanikada, biomechanics, elektiroonigga, tignoolajiyada 3D, farshaxannada, farshaxanka, iyo kuwa kale.
Geedi socodka oo dhan wuxuu keenayaa abuuritaanka tignoolajiyada cusub iyo farsamooyinka wax soo saarka.
Xirfadlayaasha MG LATAM ee abuura qalabka lafaha, daraasadda oo si joogto ah u shaqeeya si ay u daboolaan faahfaahin kasta oo uu u baahan yahay bukaanku, had iyo jeer waxay raadinayaan hababka, daahfurka bixiya gargaarka dhabta ah si bukaanku, isaga iyo qoyskiisa, uu ka soo kabsado ama u hagaajiyo tayada. nolosha.
Adeegyada Isbarbar-dhigga * P&O MG LATAM
Adeegga La-tashiga, Daraasadda, ogaanshaha iyo Qiimaynta
Marka lagu daro talada gacanta koowaad, bukaanada, macaamiisha iyo isticmaalayaasha * MG LATAM, waxay helaan fiiro gaar ah iyo fikradda tooska ah ee khabiirada ku takhasusay naqshadeynta iyo wax soo saarka (hal-abuurka heerka-caalamka iyo khubarada).
Waa maxay adeegga la-talinta gaarka ah iyo kuwa gaarka ah?
Waa tallaabada ugu horreysa ee lagu qaado hab kasta oo ku lug leh la tacaalidda bukaannada ama isticmaalayaasha kuwaas oo leh baahiyo gaar ah iyo kuwo gaar ah.
Iyada oo la tashanaya daraasadda, ogaanshaha iyo qiimaynta (qof ahaan ama meel fog), khabiirada iyo shaqaalaha u qalma ee P&O MG LATAM ayaa go'aamiya hababka la raacayo, daaweynta iyo alaabada ku habboon, iyadoo loo eegayo baahiyaha shakhsi ahaaneed iyo xaaladaha kiiska.
Bukaanku wuxuu heli doonaa: jawaabo sax ah, degdeg ah oo cad oo ka saari doona walaacooda. La-talinta xirfad-yaqaanka ah ee gacanta koowaad, iyo sidoo kale talo qiimo leh oo wax ku ool ah, si ay kaaga caawiyaan inaad si fiican u fahamto oo aad u maareyso xaaladdaada. Maxaa fududayn doona habka baxnaanintu, oo leh saabuunta wakhtiga ugu gaaban, oo leh natiijada ugu macquulsan iyo qiimaha.
Prosthetics Advanced * Catalog
Tijaabooyin goynta Pirogoff waxaa lagu sameeyay oo loogu talagalay tignoolajiyad gaar ah oo horumarsan oo isku dhafan lafaha, qaybaha fanka iyo walxaha kale, kuwaas oo la isku qurxiyo iyo beddelka anatomical la gaaro, marar badan shaqada nidaamka oo dhan sidoo kale waa la hagaajiyaa. qayb maqan.
Goynta Pirogoff waa nooc ka mid ah goynta Syme.
Taas oo tuberosity-ga dambe ee calcaneus la ilaaliyo, kaas oo loo rogo oo lagu hagaajiyo canqowga iyada oo la hagaajinayo gudaha. Sidan oo kale, dhererka weyn ee addimada ayaa la ilaaliyaa isla markaana dhibaatooyinka ay sabab u tahay cadaadiska malleolar ayaa hoos u dhigaya taageerada goynta Syme. Meesha taban ayaa ah in farsamo ahaan kakanaanta ay korodhay iyo, marka lagu daro, dabool weyn oo maqaar ah ayaa loo baahan yahay daboolida. Sidoo kale ku habboonaanta iyo biomechanics-ka goyntan kama wanaagsana goynta infracondylar.
Si loo fahmo cagaha
Waa in aan marka hore fahamnaa shaqadeeda ugu weyn oo ka kooban: Ahaanshaha taageerada lagama maarmaanka ah si loo awoodo in uu u dhaqaaqo laba lugood (laba cagood).
Cagaha ayaa fuliya qaar ka mid ah shaqooyinka aasaasiga ah:
Nuug dhammaan miisaanka jidhka, siinaya dheelitir.
Nuug saameynta joogtada ah, adoo dejinaya tamarta ay soo saaraan xoogagga ka soo baxa socodka.
La qabso noocyada kala duwan ee dusha sare, oo ay ku jiraan kuwa aan caadiga ahayn.
U shaqeeya sidii kabaal adag oo abuura xoogag firfircoon ee lagama maarmaanka u ah socodka.
Wareejinta ciidamada wareeg ee ay soo saarto sinta.
Sida cad, waxay khusaysaa socodka.
Macluumad u gaar ah cagaha
Waxaa jira dareemayaal gaar ah oo ku jira muruqyadaada, seedahaaga, iyo kala-goysyada kuwaas oo u nugul dhaqdhaqaaqa ama cadaadiska. Kuwani waxay ka caawiyaan maskaxdu inay ogaato sida cagahaagu u taagan yihiin xagga korka.
Isku-dubbaridka maskaxda jidhka ee cagta
Dhammaan dhismooyinka ka kooban cagta, murqaha iyo seedaha waxay si wadajir ah ula shaqeeyaan lafaha, seedaha, kala-goysyada, dhammaantood waxay la mid yihiin maskaxda, si caguhu ay u qabtaan hawlahan. Haddii mid ka mid ah qaybahan uu si sax ah u shaqeyn waayo, dhammaan kuwa kale ayaa saameyn doona.
Qalab silikoon ah oo bilicsan oo loogu talagalay addinka hoose, oo lagu sameeyay hal-abuurnimo iyo ka-saarid. Qalabka addinka hoose. Tiknoolajiyada isku dhafan lafaha, qaybaha farshaxanka iyo qaybaha kale, kuwaas oo ay suurtogal tahay in lagu beddelo qurxinta iyo anatomically, marar badan shaqada ayaa sidoo kale la hagaajiyaa. Caawimo gaar ah oo loogu talagalay bukaanada leh goynta, qallafsanaanta, cilladda qayb ama dhammaystiran ee hal ama labada lugood. Dhaawacyada ka dhalan kara sababo naxdin leh, laga bilaabo dhalashada ama ka dhalan kara cudurrada sida sonkorowga ama kansarka.
Qalabka Ortho ee Sare ee lugaha MG LATAM, ayaa la soo saaraa mid kasta iyadoo loo eegayo daraasadda shakhsi ahaaneed ee bukaanka iyo dhaawaciisa.
Iyada oo la adeegsanayo farshaxan farshaxan, oo ay fuliyeen khabiiro, kuwaas oo keena badeecad leh qiyaasta saxda ah ee shakhsi kasta. Maareynta si faahfaahsan ugu daydo sifooyinka gaarka ah ee bukaanka. Marka lagu daro hagaajinta caafimaadka iyo raadinta baxnaanin degdeg ah, dabiici ah oo aan fiicneyn.
MG LATAM's Advanced Ortho Prostheses ee lugaha ayaa ka sarreeya dhammaan qalabyada lagu sameeyo warshadaha, farsamada ama farsamada caadiga ah, kuwaas oo ah alaabta ugu caansan, oo ka dhigan 90% suuqa adduunka.
Waad ku mahadsan tahay isku darka qaybaha lafaha iyo ergonomic sidoo kale loo sameeyay si loo cabbiro, awoodda iyo dhaqdhaqaaqa waa la kordhiyaa ama dib loo soo kabsado, ka fogaanshaha ama ka hortagga xirashada, dhaawaca iyo cawaaqibka, sidoo kale ka hortagga xanuunka iyo sababaha. Waxa loogu talagalay bukaanku waxay kaalin mug leh ku leedahay baxnaanintooda iyadoo la hagaajinayo caafimaadkooda jir iyo maskaxeed.
Isticmaalayaasha sidoo kale waxay helayaan aaladaha qaabka saqafka lugaha, loo sameeyay si ay u daboolaan gubashada, qallafsanaanta ama cilladaha.
Aalado gaar ah oo xaalado badan sidoo kale ka hortagi kara xanuunka iyo/ama saxaya noocyada soo socda ee la xidhiidha.
Qalabka gacanta ee MG LATAM ayaa si weyn u wanaajiya muuqaalka jireed ee bukaanka ay saameysay goynta. Waxay sidoo kale leeyihiin shaqooyin aasaasi ah; biinanka ama gacanta ku qabsada, dhaqdhaqaaq fudud iyo booseed taas oo loo sameeyo si farsamaysan (iyada oo aan qaybaha myoelectric). Haddii bukaanku u baahdo, tignoolajiyada kale sida elektromechanics ama myoelectrics ayaa lagu dari karaa naqshadaha.
Kooxda nakhshaduhu waxay rabaan qalab casri ah oo cudud ah si ay u helaan tanaasul ku qanacsan inta badan dadka lugaha sare ka go'an. Qalabyada inta badan siinaya isticmaalka dabiiciga ah, iyaga oo siinaya muuqaalka ugu fiican ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah, oo leh qiyamka bilicsanaanta.
Maskaxda ku hay abuurista iyo isku darka qaybaha dhabta ah, miisaanka hooseeya, dabacsanaanta sare iyo dhererka maqaarka, caabbinta sare ee dhammaan arrimaha kiimikada iyo deegaanka ee saameyn kara alaabta.
Gaar ahaan iyadoo la ogsoon yahay in saqafyada sare ee lugaha lagu sameeyo baaritaanno waaweyn iyo culeysyo nolol maalmeedka bukaan kasta ay keento oo ay tahay inay la kulmaan caqabad kasta.
Abuuritaanka, naqshadeynta iyo soo saarista qalab cusub oo gaar ah oo loogu talagalay cagaha la gooyey. Tiknoolajiyada isku dhafan lafaha, qaybaha farshaxanka iyo walxaha kale, kuwaas oo ay suurtagal tahay in lagu beddelo qurxinta iyo anatomically, marar badan shaqada cagta oo dhan ama iyada oo ku xiran qaybta maqan ayaa sidoo kale la hagaajiyaa. Caawimo gaar ah oo loogu talagalay bukaannada goynta, qalloocan, cilladda qayb ama dhammaystiran ee hal ama labada cagood. Dhaawacyada ka dhalan kara sababo naxdin leh, laga bilaabo dhalashada ama ka dhalan kara cudurrada sida sonkorowga ama kansarka.
Qalabka sare ee lafaha ee MG LATAM ee cagta ayaa mid walba la soo saaraa iyadoo loo eegayo daraasadda shakhsi ahaaneed ee bukaanka iyo dhaawacooda.
MG LATAM's Advanced Ortho Foot Prostheses waxay ka sarreeyaan dhammaan qalabyada lagu sameeyo warshadaha, farsamada ama farsamada caadiga ah, kuwaas oo ah alaabta ugu caansan, oo ka dhigan 90% suuqa adduunka.
Isticmaalayaasha sidoo kale waxay xal u helaan qaabka Prostheses cagaha, loo sameeyay si ay u daboolaan gubashada, qallafsanaanta ama cilladaha. Aalado gaar ah oo marar badan sidoo kale ka hortagi kara xanuunka iyo/ama sixi kara noocyada soo socda ee la xidhiidha.
Orthoses Advanced * P&O MG LATAM
Lafaha cagta ee shaqeynaya waa qalab lafo ah oo u adeega si kor loogu qaado daacadnimada cagaha iyo kala-goysyada addimada hoose, iska caabinta xoogga falcelinta dhulka ee sababa dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn ee qalfoofka inta lagu jiro marxaladda taageerada socodka. Waxay sidoo kale saxaan oo ay ka hortagaan qallafsanaanta kala duwan, cilladaha iyo cilladaha ay sababaan dhaawacyada cagaha iyo cudurrada. Isticmaalka orthoses-ka shaqeynaya si loo saxo joogitaanka cagta ee liidata ayaa muujisay horumar bukaanno badan iyadoo la saxayo wareegyada xad-dhaafka ah ee gudaha-dibadeedka iyo qallafsanaanta cagaha valgus ama varus.
Alaabooyin waxtar leh si looga hortago dhibaatooyinka qaar ee addinka hoose, gaar ahaan cagta. Kaas oo ay sababaan ama/ama ka soo jeedaan naafooyin kala duwan, qayb ama guud ahaan naafaynta sida Chopart, Lisfranc, Syme goynta, iwm.
Waxay sidoo kale daboolaan xalalka dhaawacyada fudud ee ay keenaan jirro, ciyaaraha ama qaliinka ka dib, sida; cagaha macaanka, cuncun, ilmada, suulasha oo kala go'ay, tiirar dhaadheer, cago fidsan, furayaal, dabac, iwm.
Alaabooyinka caadiga ah waxay u oggolaanayaan bukaanku inuu xidho ku dhawaad ​​nooc kasta oo kabo ah, isagoo ka ilaalinaya qofka la gooyay ama dhaawacan dhibaatada helitaanka kabo gaar ah, iyo xitaa isticmaalka qasabka ah ee kabaha gaarka ah ama lafaha.
Gacmaha lafaha ee ilaaliya, saxa, ka hortaga oo yareeya noocyada kala duwan ee dhaawacyada. Inta badan kurta dhawaan la qalay, waxay hagaajiyaan bogsashada, saxaan oo ka hortagaan qallafsanaanta iyo bararka faraha badan ee ku jira ama ku jiri doona habka bogsashada.
Hal-abuurnimo iyo ka-saarid
Abuuritaanka, naqshadeynta iyo soo saarista qalabka casriga ah ee faraha gacanta bini'aadamka. Farsamada isku dhafan lafaha, qaybaha farshaxanka iyo walxaha kale.
Caawimo gaar ah oo loogu talagalay bukaanada leh goynta, qallafsanaanta, cilladaha qayb ahaan ama dhammaystiran ama noocyada kale ee dhaawacyada kuwaas oo laga yaabo inay sabab u yihiin sababo naxdin leh, natiijada cudur ama dhalashada.
Ilaaliyeyaasha iyo saxayaasha
Aaladaha loogu talagalay in lagu ilaaliyo ama lagu saxo, inta badan (waxay kuxirantahay sifooyinka dhaawaca) waxay fuliyaan labada hawlood.
Aad loogu baahan yahay faraha lagu sameeyay qalliin ama qalliin. Laakin, inta badan waxay si weyn u caawiyaan qof kasta oo laga gooyay goynta.
Isticmaalkeeda ku habboon iyo wakhtiga ku habboon waxay ka fogaataa cilladaha soo socda oo xitaa waxay ka hortagtaa goynta mustaqbalka ama qalliinka laga yaabo inay ku dhacaan baaxadda ama nooca cudurka, sida xaaladda sonkorowga (goynta soo noqnoqda), sidoo kale waxaa sabab u ah shilalka qalliinka kadib, sababtoo ah bogsashada liidata kurta. iwm.
Xaalado badan, la'aanta isticmaalka waqti macquul ah waxay keeni kartaa jirriddu inay noqoto mid qallafsan oo ka dhigaysa habka ku habboon noqo mid dheer, aad u adag oo sidaas awgeed qaali u ah bukaanka.
Ka ilaali noocyo badan oo dhaawacyo ah
Gacmaha faraha waxaa sidoo kale loogu talagalay ka-hortagga ama hagaajinta cudurrada kala duwan, dhibaatooyinka iyo xaaladaha ku xiran faraha:
Ka ilaali calluses
Dilaacayaasha Farta oo dillaacay
Ka ilaali gubashada
Ka ilaali dildilaaca maqaarka maqaarka
Caawinta dhaawacyada keratosis
Nafi oo ka hortag khilaaf
Iska yaree cadaadiska xad-dhaafka ah ee faraha
Ilaalinta caarada faraha
Waxay ku difaacaan dareen-xumada dareemayaasha faraha
U fidin ilaalinta suulasha cidi-socodka ama dubbaha
Xanuun joojinta iyo ilaalinta guud
Waxay kaa yareeyaan xanuunka iyo bararka haddii aad ka xanuunsato jeexan ama gubashooyinka farahaaga
Iska yaree xanuunka arthritis-ka ee uu keeno kacsanaanta iyo cadaadiska
Wuxuu ka yareeyaa walbahaarka ciyaaraha ee dhaawacyada
Nuugista cadaadiska iyo is jiid jiidka qalliinnada dhowaan la faahfaahiyey
Nafiso oo bixi niyada maskaxda
Ka fogaanshaha silica xanuunka dartiis, maadaama ay ka ilaaliso xididada dareemayaasha farta ama kurtu xanuunka ay sabab u tahay dhaawacyada soo socda, iyadoo ay ugu wacan tahay is jiid jiid ama taabasho iyo garaacid dusha adag.
Abuuritaanka, naqshadeynta iyo soo saarista qalabka jiilkii ugu dambeeyay ee suulasha cagaha bini'aadamka. Farsamada isku dhafan lafaha, qaybaha farshaxanka iyo walxaha kale.
Gacmo-gacmeedyada suulasha sidoo kale waxaa loogu talagalay ka-hortagga ama sixitaanka cudurrada kala duwan, dhibaatooyinka iyo xaaladaha ku xiran suulasha:
shoogga nuugayaasha, taas oo ay ugu wacan tahay nuugista cadaadiska iyo qallafsanaanta qalliinnada dhowaan la faahfaahiyey
Kala saar oo sax caafimaad ahaan, qalloocan ama qalloocan faraha
Casharrada, talooyinka iyo hagayaasha khubarada khubarada ah.
Qoraalada, wararka, dhacdooyinka, tignoolajiyada. Gacanta koowaad, xog gaar ah oo gaar ah.
Tigidhada Qaybta Xulo qaybtaAltruism (8)Xaaladaha iyo cilladaha (20) Kansarka (5) Sonkorowga (4) Shaqaale caafimaad oo heer sare ah (1)Guud (11)Qaamuuska Encyclopedia (14)Sharciga caafimaadka (4)Dunida cilmi-nafsiga (36) Baxnaaninta niyadeed (33)Qoraalo iyo Warar (14)Dhakhaatiirta lafaha iyo traumatology (58) Qalab la'aanta iyo qallafsanaanta (53)wax soo saarka (7)Qalabaynta iyo lafaha xoolaha (4)Qalabaynta iyo lafaha bini-aadmiga (27) Anaplastology (6) Maqaarka bini'aadamka ee synthetic (5)Baxnaaninta dadka la gooyey (19) Tusaalooyinka guuldarada (12)Caafimaadka * Qalabka software iyo hardware (14) Farsamooyinka soo koraya ee caafimaadka (10)
Cilmi-nafsiga waa edbinta baarta hababka maskaxeed ee dadka iyo xayawaanka. The…
Robot 'Mesmer' oo u eg Westworld ayaa ku soo noolaatay warshad UK ah
Robot u eg Westworld 'Mesmer' ayaa ku soo noolaatay warshad UK ah Qof kastaa wuxuu jecel yahay taxanaha The Metal Souls…
Is-imtixaan naasaha oo muhiim ah haweenka iyo ragga
Sababaha khatarta ah ee haweenka iyo ragga Naasuhu waa xubno qanjirro leh oo lagu garto naasleyda. Nooca...
© Dhammaan xuquuqaha way xifdsan yihiin * Rogista MG LATAM